Akụkọ - Otu UV si arụ ọrụ
Mee N'onwe Gị
General bulbs bọlbụ
Special bulbs bulbs
Mankeumman depụtara filament Bulbs
Swag ulo oru pendant lig ...
Mr11 Mr16 Gu10 3w 5w obere s ...
UL ES aha 20, Isi 24 an ...
Ọhụrụ Inwe ochie ochie ...
Tupu ịza ajụjụ a, lee ihe bụ ọkụ UV.
Nke mbụ, ka anyị tụlee echiche nke UV. UV, ma ọ bụ ultraviolet, ma ọ bụ ultraviolet, bụ ebili mmiri electromagnetic nke nwere ntụgharị n'etiti 10nm na 400nm. UV nke egwu egwu dị iche iche nwere ike kewaa UVA, UVB na UVC.
UVA: ogologo oge dị ogologo, n'etiti 320-400nm, nke nwere ike ịbanye n'ime igwe ojii na iko n'ime ụlọ na ụgbọ ala ahụ, ma nwee ike banye n'ime akpụkpọ anụ ahụ, na-eme ka anwụ na-acha. Enwere ike ekewa UVA n'ime uva-2 (320-340nm) na UVA-1 (340-400nm).
UVB: ogologo ntụgharị dị n'etiti, n'etiti 280-320nm. Ihe mkpuchi ozone ga-etinye obi gị dum, na-eme ka ntachu na ịcha ọbara ọbara, ọzịza, okpomọkụ na ihe mgbu. N'okwu ndị dị oke njọ, blisters ma ọ bụ peeling ga-eme.
UVC: wavelength dị n'etiti 100-280nm, mana n'ihi na ntụgharị dị n'okpuru 200nm bụ ultraviolet agụụ, enwere ike itinye ya na ikuku, yabụ ntụgharị nke UVC nwere ike ịgafe ikuku dị n'etiti 200-280nm, nke dị mkpụmkpụ na nke dị ize ndụ ebili mmiri bụ, mana n'ihi na enwere ike igbochi ozone oyi akwa, naanị ntakịrị ga-erute na elu ụwa.
Otu UVC si arụ ọrụ na nsị nwoke
UV nwere ike ibibi usoro ihe omimi nke DNA (Bacilli) ma ọ bụ RNA (Virus) nke microorganisms, ma mee ka nje bacteria nwụọ ma ọ bụ enweghị ike mụta nwa, ka e wee nweta ihe mgbaru ọsọ nke ịga ụlọ.
Ya mere Azịza ya bụ Ee.
UVC Lighting nwere ike igbu Covid-19
Mercury UVC oriọna na ikanam UVC oriọna
Kemgbe ụwa, Mercury lamp bụ naanị nhọrọ maka ịmị nwoke UV. Agbanyeghị, Mgbakọ Minamata na Mercury abanyela na China kemgbe August 16, 2017. Mgbakọ ahụ chọrọ ka amachibido, mbubata na mbupụ nke Mercury nwere ngwaahịa akọwapụtara na Mgbakọ ahụ site na Jenụwarị 1, 2021, na oriọna mercury ga depụta ebe a. Ya mere, oge na-adịghị oge maka oriọna Mercury, UVC LED bụ naanị ihe ọzọ a pụrụ ịdabere na ya.